Unicef: Macaluul soo wajahday boqolaal kun oo carruur reer Koongo ah - BBC News Somali
Unicef: Macaluul soo wajahday boqolaal kun oo carruur reer Koongo ah
Image caption DRC Congo
Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan carruurta ee Unicef ayaa ka digtay in carruur gaaraysa 400,000 oo qof oo ku sugan gobolka kasai ee jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee Congo in ay haysato nafaqodarro ayna u baahan yihiin daawo iyo badbaadin nafeed oo dagdag ah.
Gobolka Kasai, oo kamid ahaa gobollada ugu hodansan uguna nabadgalyada badan Jamhuuriyadda Dimuquraadiga ah ee Congo, ayaa waxaa ka dilaacay rabshado sanadkii 2016, rabshadaas oo sababay in boqolaal kun oo dad ah ay isaga cararaan guryahooda.
Si ay rabshadahaaasi uga baxsadaan, kumanaan qoys oo ku sugan gobolka Kasai ayaa waxay u carareen baaddiyaha, halkaas oo ay ku sugnaayeen dhowr bilood. Qaar badan oo dadkaas kamid ah ayaa u dhintay biyo iyo cunto la'aan.
Qaar dadkaas kamid ah ayaa iminka dib ugu soo laabanaya tuulooyin ay dagaallo daashadeen, halkaas oo aan lagu beerin wax dalag ah.
Hay;adda Unicef ayaa ku qiyaastay in 4 milyan oo qof oo ku sugan gobolka Kasai ay u baahan yihiin gargaar.
Caruurta ay hayso nafaqo darradu ayaa ah kuwa ugu liita balse haddii aanay helin kaalmo dagdag ah, Unicef ayaa sheegaysa, in qaar badan oo caruurtaasi kamid ah ay dhiman doonaan.
Hay'adda ayaa ku baaqday lacag gaaraysa 88 million oo dollar si loogu maalgeliyo hawlaheeda gargaarka: waxa ay hay'addu doonaysaa in ay balaariso xarumaha dadka lagu quudiyo, in la tababaaro shaqaalaha caafimaadka, iyo in la taageero caruurta ay kooxaha hubaysani sida khasabka ah ugu qortaan ciidan ahaan.